सबै भन्दा राम्रो पैदल यात्रा सुरु अंक युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > सबै भन्दा राम्रो पैदल यात्रा सुरु अंक युरोप मा
सबै साहसिक नक्कलहरू र खोजी गर्नेहरूलाई कल गर्दै! के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ उत्तम हाईकिंग शुरुवात पोइन्टहरू के हुन् र कसरी रेलबाट कसरी पुग्ने? त तपाईं सही ठाउँमा छौं!
श्रेष्ठ पैदल यात्रा START बुँदाहरू: पाँच Terre तटीय निशान - इटाली
को Cinque Terre मा पैदल यात्रा इटाली गर्न सबै भन्दा राम्रो कुरा को छ, र सर्वश्रेष्ठ पैदल यात्रा सुरु अंक को एक. यसको पैदल यात्रा ट्रेल्स युरोप सबैभन्दा सुन्दर हुन् र तपाईं आउटडोर प्रेमी वा कसैले भने Decadent बीच केही व्यायाम चाहने इटालियन भोजन, यो इटालीको रमाइलो गर्ने सबैभन्दा इनामदायी तरीकाहरू मध्ये एक हो शानदार तटरेखा.
तर तपाईं Cinque Terre पदयात्रा जब तपाईं तयार आउन आवश्यक. सही कुरा पैकिंग र वर्ष को सही समयमा जाँदै गर्न निशान कठिनाइ बुझ्न बाट, राम्रो जानकार हुनुको जीवन परिवर्तन पदयात्रा र wearying slog भिन्नता गर्नेछ.
कसरी ट्रेन द्वारा त्यहाँ प्राप्त गर्न:
• एक पटक इटाली, बचत एक ट्रेन को मद्दतले, रेल अझै पनि Cinque Terre पुग्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो. त्यहाँ एक स्थानीय रेल हो, को Cinque Terre एक्सप्रेस रेल, जो बीच तट साथ चल्छ स्टेशन लास्पेजीया र Levanto को Centrale. यो सबै पाँच सहर मा रुक (Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola, Riomaggiore), र तपाईं क्षेत्र हुनुहुन्छ एक पटक उनलाई बीच सार्न यो लिन आवश्यक छ (तपाईं अक्सर-चुनौतीपूर्ण ट्रेल्स मा पदयात्रा गर्न रोज्न नभएसम्म). गर्मी को रूपमा 2016, को Cinque Terre एक्सप्रेस को लागत छ €4प्रति यात्रा. यस बन्द-मौसममा, सामान्यतया नोभेम्बर मार्च गर्न, लागत गर्न € 1.80 खस्छ. यो रेल सुरक्षित बस्ने प्रस्ताव छैन.
• फ्लोरेन्स देखि पुग्दै वा रोम: त्यहाँ केही प्रत्यक्ष लास्पेजीया Centrale गर्न फिरंज सान्ता मारिया Novella स्टेशन बाट प्रति दिन रेल छन्; अरूलाई तपाईं नाइस मा रेल परिवर्तन गर्न आवश्यक. मूल्यहरु € 13,50 मा सुरु. लास्पेजीया मा, को Cinque Terre एक्सप्रेस लागि परिवर्तन.
श्रेष्ठ पैदल यात्रा START बुँदाहरू: Eagles पैदल - अष्ट्रिया
को ईगल वाल्क माथि बनेको छ 23 लिङ्क चरणमा, जो Tirol मार्फत एक सास-लिने मार्ग पछ्याउन. क्षेत्र मा सर्वश्रेष्ठ पैदल यात्रा सुरु अंक, धेरै खण्डहरू सजिलै केबल कार पहुँच गर्न सकिन्छ र पूर्ण रूपमा पूरा- वा आधा दिन भ्रमण. हामी यो ब्लग को हाम्रो मनपर्ने खण्ड तपाईं परिचय गर्न चाहन्छु.
तपाईं एक दिन पैदल वा एक बहु-हप्ता साहसिक योजना हुनुहुन्छ कि पहाड, तपाईं एक ठूलो हुन ईगल वाल्क पाउनुहुनेछ बाहिरी अनुभव. यो अन्वेषण गर्न अनुपम अवसर प्रदान गर्दछ, अनुभव, र प्रकृति जडान.
हाम्रो शीर्ष छानिने: ताल Zireiner हेर्नुहोस
प्रासंगिक पैदल यात्रा गर्नका लागि आधा दिनको पैदल यात्रा. तल्लो Inn उपत्यकाका Kramsach देखि, को Sonnwendjoch घर गर्न कुर्सी लिफ्ट लिन. छोटो पैदल को सुखद Zireiner ताल तिर जान्छ, जो लगभग 1,800-मीटर समुद्र स्तर माथि उपत्यकाका स्थित छ - तातो मा शांत गर्न ठूलो स्थान गर्मी महिना. को पैदल Zireiner Alm खर्क जारी (1,698एम) को कुर्सी लिफ्ट को शीर्ष फर्केपछि अघि, तपाईं Inn उपत्यका मा तल फिर्ता सवारी अनुमति.
यो गर्न सजिलो छ यात्रा बेलायत बाट रेल द्वारा अस्ट्रिया. तपाईं जान सक्नुहुन्छ लन्डन भियना गर्न, साल्जबर्ग वा एकै दिनमा ईन्न्सब्रक उच्च गतिको रेल. वा lunchtime लिन Eurostar लन्डन बाट ब्रसेल्स गर्न, एक Thalys उच्च गति रेल गर्न कोलोन, र उत्कृष्ट Nightjet ताजा स्थिति रेल नाइस गर्न, लिन्ज, वा भियना रातारात. त्यहाँ एक पटक, Tirol गर्न प्राप्त सार्वजनिक यसको व्यापक नेटवर्क संग सजिलो छ परिवहन. यसलाई रेलका प्रयोग गरेर क्षेत्र वरिपरि यात्रा गर्न सजिलो छ. Hikers भाग वा ईगल वाल्क सबै मा लिन स्थानीय सार्वजनिक परिवहन को उपयोग गरेर प्रत्येक चरण को सुरु र समाप्त अंक पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ इच्छा.
श्रेष्ठ पैदल यात्रा START बुँदाहरू: CAMINO DE SANTIAGO - SPAIN
को कैमिनो सेन्ट जेम्स को बाटो रूपमा अंग्रेजी मा जानिन्छ. सबै क्यामिनो तीर्थयात्रा मार्गहरू सेन्टियागो डे कम्पोस्टेलामा जान्छन् जहाँ सेन्ट जेम्सका अवशेषहरू छन्, (सान्टियागो), नवौं शताब्दीमा पत्ता थिए. तीर्थयात्रा १० औंमा लोकप्रिय थियो, 11th, र १२ औं शताब्दी र त्यसपछि लोकप्रियतामा बिस्तारै अस्वीकार गरियो.
20 औं शताब्दीमा द्वारा, लगभग कुनै एक मार्गहरू कुनै पनि हिड्ने थियो. त्यसो भए १ 1970 .० को उत्तरार्ध र १ 1980 .० को प्रारम्भमा मार्ग केहि रूचिमा रुचि भयो. उनीहरू लेख्न थाले र मार्गहरू नक्शा फेरि.
21 औं शताब्दीमा, एक तिर्थयात्रा को विचार सायद विचित्र छ. तथापि, एक महिनाको लागि हिँड्न र आधुनिक उपकरणहरूबाट विच्छेदन गरिएको कडा परिश्रम एकदम स्वतन्त्र छ.
Sarria तिनीहरू प्रारंभ बिन्दु रूपमा तीर्थयात्रीहरू द्वारा रुचि को कैमिनो डे सान्टियागो मा शहर छ. भन्दा थप 300,000 मा de Compostela सान्टियागो यात्रा कि तीर्थयात्रीहरू 2017, केही 60% को कैमिनो Frances पालना गर्न छान्नुभएको थियो. र अधिक 80,000 तिनीहरूलाई आफ्नो सुरूवात बिन्दु रूपमा Sarria छनौट. सारिया छनौट गर्नुको मुख्य कारण यो हो कि तीर्थयात्रीहरूलाई कम्पुष्टेलाबाट सम्मानित गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम दूरी चाहिन्छ (को तिर्थयात्री प्रमाणपत्र). सान्टियागो गर्न दूरी सिर्फ पाँच चरणमा ढाकिएको र एक ठूलो संख्या दावा गर्न सकिन्छ आवास विकल्पहरू र तीर्थयात्रीहरूका लागि सेवाहरू. Sarria देखि सार्वजनिक परिवहन मा प्राप्त गर्न सजिलो छ स्पेन विभिन्न भागहरु.
रेल द्वारा Sarria प्राप्त गर्न कसरी:
रेल सबैभन्दा मध्ये एक छ सहज विकल्पहरू तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने मैड्रिड देखि Sarria गर्न. त्यहाँ एक प्रत्यक्ष छ जडान एक दिन दुई पटक मैड्रिड गरेको Chamartin रेल स्टेशन छोड्दा, एक यात्रा लगभग छ घण्टा समय. यसबाहेक, त्यहाँ सान्टियागोडेक्युबा Compostela र लुगो संग मैड्रिड जडान विभिन्न रेल छन्, गलिसियन् शहर जो देखि यो Sarria प्राप्त गर्न धेरै सजिलो छ, धेरै प्रत्यक्ष हरेक दिन जडानहरू संग. तपाईं Renfe सम्पर्क गरेर सबै समय र आवृत्तियों परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, स्पेन राष्ट्रिय रेल कम्पनी.
यात्रा रेल पनि सबै भन्दा राम्रो विकल्प छ बार्सिलोना बाट. त्यहाँ दैनिक बार्सिलोना प्रत्यक्ष लिङ्क हुन् (वा तपाईंले Monforte डे Lemos मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ), दिन को समयमा रेल संग (तपाईं संग AVE वा उच्च गतिको रेल संयोजन भने लामो दुरी विकल्पहरू) र एकै रातमा रेल. बार्सिलोना बाट औसत यात्रा समय छ 12 घण्टा. बार्सिलोना बाट Sarria गर्न रेल पनि टारागोना सहित अन्य प्रमुख शहर संग जडान, Lleida, जरागोजा, प्यामप्लोना, भिक्टोरिया, बर्गोज, प्यालेनचिया, र लियोन.
सान्टियागोडेक्युबा Compostela देखि, Renfe Sarria दुई ​​दैनिक रेल प्रदान गर्दछ: एक मा5बजे (दुई घण्टा 'यात्रा समय); र मा 6.07 बजे (लगभग चार घण्टा एउटा यात्रा समय संग).
लुगो देखि, को रेल सबैभन्दा सहज विकल्प पनि हो. Renfe मा लुगो देखि Sarria तपाईं प्राप्त हुनेछ धेरै दैनिक जडानहरू प्रदान गर्दछ 30 मिनेट.
श्रेष्ठ पैदल यात्रा START बुँदाहरू: WESTWEG निशान - जर्मनी
यो Westweg निशान सबै जर्मन लामो-दूरी पैदल यात्रा ट्रेल्स को मूल हो भन्नुभयो गर्न सकिन्छ. यसलाई फिर्ता आफ्नो तरिका को पहिलो नामित बाटो भए 1900. त्यस बेला देखि, को निशान को एक दूरी ढाक्न हुर्किसकेका छ 177 माइल (285 किलोमिटर) - उत्तर मा Pforzheim मा शुरू र दक्षिण बासेल मा समाप्त.
को Mittelweg र Ostweg गर्न विपरीत, को Westweg ज्यादातर हिमालहरूको पश्चिम मार्फत लिन्छ. र तपाईं जान रूपमा, तपाईं सबै भन्दा ठूलो जर्मन कम पहाड दायरा प्राकृतिक विविधता साक्षी हुनेछ. यो बाक्लो FIR र स्प्रूस वन. यो पहाड यसको नाम दायरा दिन्छ के हो, उत्तरी मा treeless expanses कालो वन. शान्त पहाड पोखरी, मनोरम रक crests, हिमनदीय घाटिहरुमा, र पहाड.
बिचमा, तपाईं फेरि र फेरि उच्चतम चुचुराहरूको चढ्नु छौँ. तपाईं Hornisgrinde को पठार माथि पदयात्रा र Belchen र Hochblauen भ्रमण. को Schliffkopf मा दृश्य आनन्द र Hohloh वरिपरि उच्च बंजर भूमि घुमफिर. तपाईंको पदयात्रा एक साँचो उच्च बिन्दु, को पाठ्यक्रम, को Feldberg को चढाई हुनेछ. काला वन मा उच्चतम पहाड.
रेल द्वारा Westweg प्राप्त गर्न कसरी:
सबैभन्दा पैदल यात्रा फैलिएको व्यवस्थित दूरी मा विभाजित गर्न सकिन्छ. किनभने पैदल यात्रा ट्रेल्स साथ सबैभन्दा गाउँमा हुन सक्छ कि छ रेल द्वारा राम्रो पुग्यो. को पदयात्रा योजना लागि ठूलो मद्दत Schwarzwald Tourismus GmbH को शुल्क को सामान्य नक्सा निःशुल्क छ (Ludwigstrase 23, 79104 Freiburg, www.blackforest-tourism.com). यसले KONUS का लागि यस क्षेत्र र बाहिरका सबै ट्रेन र बस मार्गहरू देखाउँदछ.
साथै, धेरै समुदाय पर्यटन पैदल यात्रा लागि विशेष सुझावहरू र दिन यात्राको आफ्नो KONUS अतिथि लागि. तपाईं लामो बसाइ योजना यदि यो साथै एक SchwarzwaldCard प्राप्त गर्न उपयोगी हुन सक्छ. तपाईं intensively कार्ड जडान छूट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो कार्ड राम्रो लगानी छ.
तपाईंको पैदल यात्रा जूता मा राख्नु र केही प्रकृति पैदल यात्रा रमाइलो गर्न तयार? मिनेट भित्र र कुनै अतिरिक्त शुल्क मा आफ्नो रेल बुक एक ट्रेन सेव!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hiking-start-points%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#hikes #पैदल यात्रा #हाइकिंगस्टार्टिंग पोइन्ट्स #ट्रेल्स longtrainjourneys trainjourney रेल सुझावहरू